आगामी असोजभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
जेठ २१, काठमाडौं । हिमालयन पावर पार्टनरले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको निर्माण कार्य लकडाउनका कारण रोकिएको छ ।
गत चैत मसान्तभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गरि व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त कम्पनीले लकडाउनका कारण उक्त लक्ष्य अन्योल बनेको बताएको छ । असारदेखि लकडाउनको स्वरुप खुकुलो भई निर्माण कार्य शुरु भए आगामी असोज सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ ।
उक्त कम्पनीले लमजुङ जिल्लामा रहेको दोर्दीखोलाको पानी उपयोग गरि २७ मेगावाट क्षमताको दोर्दीखोला आयोजना निर्माण गरिरहेको हो ।
विसं २०७१ साल पुस महीनादेखि निर्माण कार्य शुरु गरि विसं २०७५ जेठ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि विसं २०७२ सालको विनासकारी भुकम्प र नाकावन्दीपछि हालको कोरोना संक्रमणले आयोजनाको निर्माण कार्य अनिश्चित बनेको हो ।
उक्त आयोजनाको कुल लागत रू. ४ अर्ब २३ करोड ५४ लाख १७ हजार रहेको छ ।आयोजना निर्माणका लागि संस्थापकतर्फबाट ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणबाट ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी रू. १ अर्ब ६ करोड ५४ लाख १७ हजार चुक्तापूँजी कायम गरी उक्त कम्पनीले लगानी गरेको छ ।
सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीले विसं २०७४ साल असारमा शेयर विक्री गरेको हो । जिल्लामा आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन शुरु नगरको उक्त कम्पनीले खर्चलाई पनि सोहि आयोजनामा पूँजीकृत गरेकाले आम्दानी र खर्चको विवरण उल्लेख गरेको छैन । जसका कारण कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी पनि गणना गर्न नसकिएको कम्पनीले प्रष्ट पारेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण बुधवार सार्वजनिक गरेको उक्त कम्पनीको कुल सम्पत्ति रू. ३ अर्ब ५४ करोड ४४ लाख ५८ हजार रहेको छ । यो सम्पत्ति गत वर्षको यसै अवधिसम्म रू. २ अर्ब ७५ करोड ४ लाख १९ हजार थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको कुल सम्पत्ति बढेको छ ।
तेस्रो त्रैमाससम्म उक्त कम्पनीले लिएको कर्जा रकम रू. २ अर्ब ४१ करोड १४ लाख ४९ हजार रहेको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म उक्त कम्पनीले रू. १ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख १३ हजार कर्जा लिएको थियो । कर्जा रकम भने गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढी रहेको छ ।